Dowladda Sweden oo Soomaaliya u balan-qaaday in ay ka taageerayso horumarinta Dimuqraadiyada – Radio Daljir
Dowladda Sweden oo Soomaaliya u balan-qaaday in ay ka taageerayso horumarinta Dimuqraadiyada
Seteembar 4, 2013 7:04 b 0
Muqdisho, September 4, 2013 – Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, waxaa maanta kulan ku qaatay Madaxweynaha Soomaaliya Xasan sheikh Maxamuud iyo wasiirka iskaashiga caalamiga ah ee Sweden Gunilla Carlsson.
Wefdiga ka socda Sweden iyo madaxweynaha Soomaaliya ayaa kulan ay ku yeesheen gudaha garoonka, waxay kaga hadleen arrimo badan oo khuseeya xiriirka iyo iskaashiga labbada dowladdood, iyadoo la isku afgartay wada-shaqeyn.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan sheikh Maxamuud oo shir jaraa?id ku qabtay Muqdisho kadib kulanka, ?ayaa sheegay in ay kala hadleen wefdiga Sweden sidii loo sii wadi lahaa kaalmada Soomaaliya ay u baahan tahay iyo arrimo kale oo uusan carabka ku dhufan.
Wasiirka xiriirka iyo Iskaashiga caalamiga ah ee Sweden Gunilla Carlsson, ayaa sheegtay in ay dowladda Soomaaliya ka kaalmeyn doonaan horumarinta Dimuqraadiyada iyo dib u dhiska dalka Soomaaliya oo wakhtigan dadaal loogu jiro.
Taageerada dowladda Sweden ee dhinaca horumarinta Dimuqraadiyada ayaa waxay ku soo beegmaysaa xili qorshaha dowladda ee 2016 uu yahay in loo gudbo doorashada soo socota nidaam ay dadku codeynayaan, shir haatan ka socda Muqdisho ayaa qoddobkaas ?iyo qodobo kale lagu soo qaadi doonaa.
Dhegeyso: Shirkii Jaraa?id ee Madaxweyne Xasan sheikh iyo Wasiirka Iskaahiga Sweden Gunilla Carlsson
Madaxweynaha Jubba oo ka war-bixiyey heshiiskii Ethopia iyo qorshaha maamulka (Dhegeyso)
Isimada Bay iyo Bakool oo dhaleeceeyey dil xalay Baydhabo loogu geystay nabbadoon (Dhegeyso)